Ra’isul Wasaare;Xassan Cali Kheyre Oo Turkiga Ku Wajan. – Warsan iyo Weeedh Saxsan oo Sugan.
Ra’isul Wasaare;Xassan Cali Kheyre Oo Turkiga Ku Wajan.
Muqdisho-FMN-Ra’iisul Wasaaraha Mudane;Xassan Cali Kheyre ayaa maanta lagu wadaa in uu ka duulo Garoonka Diyaaradaha Aadan Cabdulle Cusmaan “Aadan Cadee” isaga oo ku sii jeeda magaalada Ankara ee dalka Turkiga.
Warar aaanu ka helnay qaar kamida saraakiisha xafiiska Ra’iisul Wasaare Khayre ayaa xaqiijiyay in maanta u duuli doono Ra’iisul wasaare Kheyrre wadanka Turkiga, isaga oo halkaasi kula soo kulmaya Madaxda dalkaas ugu sareysa sida Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo Ra’iisul Wasaaraha Dalkaasi Binali Yildirim.
Ujeedka socdaalka Ra’iisulwasaare kheyre ayaa lagu sheegay sidii uu dowlada Turkiga ugala soo hadli lahaa ishkaashiga xoojinta xiriira labada wadan, oo ay ka mid yihiin arrimaha dhaqaalaha, taageerada Soomaaliya ee Turkiga, iyo waxyaabo kale.
Previous Previous post: Ciidamada AMISOM oo Weerar Gaadmo ah Lagula Eegtay Duleedka Muqdisho.
Next Next post: Ra’isul Wasaare;Kheyre Oo Dalka Turkiga U Ambabaxay.